५ आश्विन २०७६ | September 22, 2019
लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
Monday, 10 Jun, 2019 11:54 AM
२७ जेठ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको माग गर्दै गरेको विज्ञापन प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र संघीयताको मर्मविपरित भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिका सदस्यको जिज्ञासाा सुनेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले प्रक्रिया संविधान अनुसार नै रहेको दाबी गरे । समावेशिताको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा लोकसेवा आयोगको भएको बताए तर पनि यसमा समितिको अधिकार भएकाले निर्देशन मान्य हुने पण्डितले जनाए ।
कानुनअनुसार प्रदेशले विज्ञापन गर्नु पर्नेमा केन्द्रले विज्ञापन गर्नु उपयुक्त नभएको समितिका सदस्यको मत थियो । उनीहरुले तत्काल प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको संरचाना विस्तार गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न माग गरे ।
लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको माग गरी विज्ञापन निकालेको थियो । हालसम्म १ लाख बढीले आवेद फारम भरिसकेको मन्त्री पण्डिले जानकारी दिए ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य विजय सुब्बाले भने यस निर्णयमा आफू सहमत नभएको बताए । उनी निर्णय हुनुअघि नै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । अर्का सदस्य झपट रावलले भने कानुन बनीनसकेको अवस्थामा हतारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको बताए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंंक लि. र इसेवा फोन पे प्रा.लि.बीच अनलाईन भुक्तानी सम्झौता
दशैं अफर सहित सिटिसी मलमा मोबाइल मेला सुरु, अफर भित्र अफर, सस्तोमा मोबाइल
दशैँमा घर जाँदा ठगिनुहोला ! हेर्नुस् सरकारले तोकेको भाडादर कहाँको कति छ
गर्लफ्रेन्डलाई अन्डरवाटर प्रपोज गर्दा गयो ज्यान
काठमाडौंमा बाटो काट्न सिकाउन कलाकार र एयर होस्टेज पनि खटिने
५ असोज काठमाण्डौ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीका साथ उनकी धर्मपत्नी सरस्वती ज्ञवाली पनि छन् । मन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रियसभा दिगो विकास समितिका सभापति तारादेवी भट्ट र सदस्य दीनानाथ शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौड्याल
कीर्तिपुर आउँदा माइती आएजस्तो लाग्छ : प्रचण्ड
४ असोज, काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कीर्तिपुर आउँदा माइतीघर नै आएजस्तो लाग्ने बताएका छन् । शनिबार कीर्तिपुरको पाँगामा रहेको जनसेवा माध्यामिक विद्यालयमा नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘कीर्तिपुर आउँदा, अझ पाँगा आउँदा मलाई माइती आएजस्तो लाग्छ । मेरो माइतीघर नै हो भन्याजस्तो लाग्छ ।’ उनले आफू २०–२२ वर्षको उमेरमा कीर्तिपुरमा बसेकोले भावनात्मक सम्बन्ध पनि रहेको बताए । ‘तानाशाही पञ्चायतको आन्दोलनको बेलामा भूमिगत रूपमा बस्ने, प्रशिक्षणहरू चलाउने, संगठन बनाउने र जनतासँग अन्तर्क्िरया गर्ने थलो पाँगा, कीर्तिपुर थियो,’ उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली शनिबार न्यूयोर्क जाँदै
४ असोज, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शनिबार अमेरिकाको न्यूयोर्क जाँदै छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ७४औं महासभामा सहभागी हुन उनी शनिबार राति साढे ९ बजे न्यूयोर्क जान लागेकोे परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महासभामा सहभागी नहुने भएपछि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न लागेका हुन । उनले महासभालाई असोज १३ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।न्यूयोर्कमा रहँदा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले साकर्का विदेश मन्त्रीहरुको अनौपचारिक वार्ताको अध्यक्षता गर्ने, अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित देशका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेलगायत कार्यक्रम पनि रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२ असोज, काठमाडौं । भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) लाई आसाममा मात्रै सीमित नराखी देशभर लागू गरिने बताएका छन् । उनले सबै अवैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिने पनि घोषणा गरे । भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दूस्तानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले भने, ‘तपाईंहरु ईंग्ल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका गएर बस्नुस् । तपाईंलाई कसैले घुस्न दिने छैन । भारतमा आएर चाहिँ कोही कसरी बस्न सक्छ ? यसरी देश चल्दैन ।’ उनले समयको आवश्यकता भन्दै देशका सबै नागरिकले दर्ता हुनपर्ने बताए ।
तालिबानले अमेरिकालाई भन्यो–वार्ताका लागि हाम्रो ढोका खुला छ
१ असोज, काठमाडौं । तालिबानले आफ्नो तर्फबाट वार्ताको ढोका बन्द नरहेको बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वार्ता पुनः स्थापित गर्न चाहन्छन् भने आफ्नो तर्फबाट ढोका खुला नै रहेको तालिबानले बताएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । तालिबानको तर्फका वार्ता प्रमुख शर मोहम्मद अब्बास स्तानिक्जाइले वार्ता नै आफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको एक मात्र माध्यम रहेकोमा जोड दिएका छन् । ट्रम्पले गएको हप्ता अफगान तालिबानसँगको वार्ता अन्त्य भएको बताएका थिए ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको घोषणा– पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मीर भारतको हिस्सा हुनेछ
१ असोज, काठमाडौं । भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मीर एक दिन भारतको हिस्सा हुने बताएका छन् । आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा भएको अवसरमा उनले मंगलबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतका विदेश मन्त्री जयशंकरले भनेका छन, ‘पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मीरको बारेमा भारतको दृष्टिकोण प्रष्ट छ । पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भारतको हिस्सा हो र हामीलाई लाग्छ एक दिन त्यो भारतको हिस्सा हुनेछ ।’ भारतीय विदेश मन्त्रीले संविधानको धारा ३७० को बारेमा भने,‘यो दुईपक्षीय मुद्दा होइन । यो भारतको आन्तरिक मुद्दा हो ।